Mozilla ga-eji Fenix ​​dochie Firefox n'oge na-adịghị anya | Gam akporosis
Na nso nso a Ekwenyere na Mozilla na-arụ ọrụ na ihe nchọgharị ọhụrụ. Ọ bụ ihe gbasara Fenix, na ụlọ ọrụ ahụ na-emepe ugbu a. Atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ na-eme n'ihi na ihe nchọgharị a bụ nke na-anọchi Firefox. Ihe ị nwere na ụzọ gị ma ọ dị ka ọ ga-eme na ọnwa ole na ole. Ebe ọ bụ na ekpughere data ọhụrụ gbasara atụmatụ ụlọ ọrụ ugbu a nwere na nke a.
Firefox bụ ihe nchọgharị mbinye aka ugbu a. Enwere mmelite abụọ buru ibu maka otu, nke ga-amalite n'oge na-adịghị anya. Mana mgbe ha gachara, naanị ihe nche ga-ahapụ maka ihe nchọgharị a ma ụlọ ọrụ ahụ ga-etinye Fenix ​​n'ahịa ahụ.
Firefox ga-enwe mmelite abụọ, mbipute 67 na 68. Mwepụta nke ọ bụla n'ime ha na-ezube, maka Mee 14 na July 9. Ozugbo a wepụtara mmelite ihe nchọgharị abụọ a, Mozilla agaghị ahapụ ọzọ. Ma ọ dịkarịa ala ndị a bụ atụmatụ ha, mana ha ga-elekwasị anya na Fenix, nke na-abịa n'oge na-adịghị anya.
Ọ bụ ezie na ruo ugbu a enwere obi abụọ banyere mmalite nke Fenix ​​n'ahịa. Ebe ọ bụ na ihe nchọgharị ọhụrụ a ga-eji ụlọ dị iche. Ọzọkwa, ọnọdụ nke mmepe ya amabeghị n'ezie. Ya mere, enwere ike ịnwe oge n'etiti njedebe nkwado Firefox na mwepụta nke ọhụrụ.
Mozilla yiri ka o doro anya banyere mgbanwe a na ihe nchọgharị. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ahapụghị anyị ọtụtụ nkọwa maka otu ha si eme atụmatụ ịme mgbanwe a. Na mgbakwunye, ọ na-anọchite anya ihe egwu, ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche nke ahụ Firefox bụ ihe nchọgharị nke rụpụtara ọtụtụ ewu ewu afọ ndị ikpeazụ a.
N'ihi nke a, ọ ghọọ otu n'ime nhọrọ kachasị ewu ewu na gam akporo. Mana ụlọ ọrụ ahụ yiri ka ọ na-akụ nzọ doro anya na Fenix ​​dị ka ihe nchọgharị ya n'ọdịnihu. Anyị na-atụ anya ịnụ ọtụtụ ihe gbasara atụmatụ gị n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mozilla ga-eji Fenix ​​dochie Firefox na ọnwa ole na ole
Otu esi agbanwe aha njirimara na Instagram